मृत्युपछि पनि कोरोना रिपोर्ट सजिलै पाउँदैनन् आफन्तहरू ! - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home Editor-Picks मृत्युपछि पनि कोरोना रिपोर्ट सजिलै पाउँदैनन् आफन्तहरू !
—जटिल प्रकृतिका बिरामीको कोरोना परीक्षण गर्नै कन्जुस्याइँ
स्वाब संकलन गरिए पनि रिपोर्ट ढिलो आउँदा आफन्तहरू प्रताडित हुने गरेका छन् । गुल्मीमा केही महिनाअघि मृत्यु भएका मृतकका एक आफन्तले भने, ‘मृत्यु त भयो तर स्वाब संकलन गरेको झन्डै एक हप्तामा रिपोर्ट आयो । हामी निकै तनावमा थियौं ।’
हाल दैनिक ११ हजार जनाको हारहारीमा कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ । परीक्षणको दायरा बढाउँदा रिपोर्ट होल्ड भएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्तै, अस्पतालहरूले लक्षण देखिएका बिरामीहरूको कोरोना परीक्षणलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस चार वर्षिय बालिका बलात्कार गर्ने किशोरलाई १२ वर्ष जेल
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताले केन्द्रीय प्रयोगशालाले आकस्मिक रिपोर्ट स्वाबको नमुना आएको १२ घण्टाभित्रसम्म दिइने गरेको बताए । उनले भने, ‘आकस्मिक अवस्थाको भए स्वाबको रिपोर्ट सामान्यतया १२ घण्टासम्म आइपुग्नु पर्छ । सम्बन्धित अस्पतालका चिकित्सकको सिफारिस चाहिन्छ । तर, होल्डिङ भएका स्याम्पलको रिपोर्ट २४ देखि ३६ घण्टाभित्र आउँछ ।’
शुक्रबार देशभर थप ९ सय २७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । योसहित नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या ३६ हजार ४ सय ५६ जना पुगेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा ३ सय ५०, ललितपुरमा ११ र भक्तपुरमा ५४ संक्रमित थपिएका छन् । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ४ हजार ८ सय २० पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ सय ६९ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसहित नेपालमा हालसम्म २० हजार २ सय ४२ उपचारपछि निको भएका छन् । नेपालमा हालसम्म १ सय ९५ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । हालसम्म ६ लाख ५८ हजार १ सय १० जनाको आरटी–पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
देशभर क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या ८ हजार ९ सय ३९ पुगेका छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार १९ रहेको छ ।
राजधानी समाचारदाता - February 25, 2020
काठमाडौं । सरकारले चार जना सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सचिवको सरुवा र हालै...
धुलिखेलमा मृत्यु भएकी महिलाको गाउँमा सेना परिचालन गरेर सिल
मेलम्ची । धुलिखेल अस्पतालमा निधन भएकी महिलाको गाउँमा सिल गरिएको छ । आज बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बाह्रबिसे नपा–९ की २९ वर्षीय महिलाको...
बाराको सिमरामा जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक मन्टेश्वरी : ‘दंग अभिभावक, भरिभराउ बिद्याथी’
प्रदेश राजधानी संवाददाता - February 28, 2020
सिमरा । बाराको सिमरामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक बिद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखी संचालन गरिएको बाल मन्टेश्वरीमा अभिभावकको रुची बढेको छ...
Exclusive टेनिस रोका - May 29, 2020
काठमाडौं । सरकारले महाभूकम्प २०७२ पछिको पुनर्निर्माणको बाँकी सबै काम आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा सम्पन्न गर्ने भएको छ । पुनर्निर्माण क्षेत्रमा आव २०७७÷७८ का...
Editor-Picks डब्बु क्षत्री - February 15, 2020
करिब दुई वर्ष नृत्य प्रशिक्षण र एकवर्षे अभिनय प्रशिक्षणपछि चलचित्र ‘दुलही रानी’बाट डेब्यु गरेकी दिपाशा बिसीको अभिनय यात्रा...
कोरोना जोखिमबीच सप्तरीमा छठ पर्व सुरु
Exclusive एमके माझी - November 18, 2020
राजविराज । कोरोना महामारीको त्रासका बीच यहाँ हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले लोक आस्थाको पर्व छठको सुरु गरेका छन् । अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाउँने...